Kedu ihe mere na ụbọchị ọmụmụ gị? | Martech Zone
Kedu ihe mere na ụbọchị ọmụmụ gị?
Sọnde, Febụwarị 25, 2007 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
O nwere oge m tụrụ ụjọ mgbe ụbọchị ọmụmụ m na-abịa. Kedu ihe mere na ncheta ọmụmụ m? April 19th nwere ụfọdụ n'ezie na-akpali ihe ndị na-eme na ya US USS Iowa gbawara, Wako, Oklahoma obodo city ugh. Laghachi n’akụkọ ihe mere eme, ọ gaghị akawanye mma. Ọ bụ ụbọchị American Revolution malitere!
Wikipedia nwere ntinye maka ụbọchị ọ bụla n'afọ ị nwere ike ịgụ. Achọrọ m ịgbakwunye na ọ bụ ụbọchị a mụrụ m, mana ejighi m n'aka na nke ahụ bụ akụkọ ihe mere eme n'ezie. 😉
OpenID arụnyere na na njikere!
Daalụ, Squidoo! (Shoemoney rịba ama)
Feb 25, 2007 na 4:36 PM
Oops… ndo na ọ naghị arụ ọrụ ntụgharị (Ọ bụ n'ezie ihe nchọgharị dị egwu). M nnọọ edozi ya!
Feb 26, 2007 na 3:38 PM
N'aka nke ọzọ ana m eso Christopher Lee na Vincent Price, yana Lou Gossett Jr. (May 27)
Feb 26, 2007 na 5:50 PM
Ọ ga-abụrịrị ọtụtụ mfe ma e wezụga na IE7 emezigaghị uru nke ihe ahọpụtara. Mpempe akwụkwọ ahụ were ụlọ okpukpu abụọ maka nke ahụ.
Nke ahụ bụ ihe atọ dị mma ịkọrọ ụbọchị ọmụmụ!
Feb 26, 2007 na 3:46 PM
Cool - M na-ekekọrịta ụbọchị ọmụmụ m karịa ka Cameron Diaz 🙂
(Na, ee, Ntụgharị is egwu. Arụrụ m ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu na ntanetị dị mma, ma chọpụta na, ọ bụ ezie na ọ bụ XML na-ekwenye ekwenye, ọ rụghị n'ụzọ ziri ezi na ntụgharị.)
Feb 26, 2007 na 5:51 PM
Cameron Diaz yiri ka ọ bụ otu n'ime kpakpando ndị ahụ nwere isi ya n'isi. Ma ọ bụ onye na-ekpo ọkụ! 🙂
ECards ụbọchị ọmụmụ
Mee 12, 2007 na 4: 35 PM
bday m bu na June 21st ma lee ihe wikipedia kwuru:
"Thisbọchị a na-akarakarị oge anwụ n'oge ọkọchị na mgbago ugwu na oge anwụ n'oge oyi na ndịda mgbago ụwa, yabụ na-abụ ụbọchị nke afọ nke kachasị awa nke ehihie na mgbago ugwu na nke pere mpe na mpaghara ndịda."